लायक, नालायक नायक ! | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / लायक, नालायक नायक !
लायक, नालायक नायक !
Posted by: युगबोध in विचार October 10, 2018	0 114 Views
‘सरकार घे राबन्दीमा प¥यो ’ यो कस्तो भनाइ/ बुझाइ हो ? यस्तो बलियो सरकारलाई पनि कसै ले घे राउ गर्न सक्छ र ? क्याबिने ट र मन्त्रीलाई खुरुखुरु राम्रा परिपक्व निर्णय गर्न कसले छे के को छ र ? कार्यान्वयनमा के ही बाधक छ र ? नापी र माल कार्यालयमा इतिहासमा नभएको घुस चले को छ । अरु कारणले हो इन संघीय भूमि मन्त्रालयले नै जनता लुटाउदै छ । निःशुल्क कित्ताकाट बन्द छ । तर राम्रो रकम (घूस) मा मजाले खुला छ । कहिले हो त्यो भूमि हो कि भुडी नीति आउने ? जनता लुटिएर नांगै भएपछि ? गो पाल दहितले कसको स् वार्थमा, किन रो के ? उनै ले जानून् । अहिले सम्म ताई न तुई । मन्त्रालयका सचिव र अरु अधिकारीले के गरे र बस्छन् ? के मा ब्यस्त छन् ? घूसको महमा डुबे र ? त्यस् तै खिलराज आए कसको हितमा पाच किमी दूरीमा (बो र्डर/सीमा) क्यासिनो खो ल्न नदिने निर्णय गरे , तर यो सरकार खो ल्न किन डराउ“छ ? ने पालीले खे ल्न नपाउने छ अनि विदे शी खे ल्दा किन दूरी कायम गनेर् ? यस् तै जताततै धे रै गर्नुपनेर् छ । प्रदे शमा दिने काम छिटो दिनुप¥यो  । तर के मा हो के मा अलमल ? के को डर हो ? अनि सरकार घे राउको स् याल हुइया ! राम्रो गरौ ं कसै ले घे र्न सक्दै न, गर्न नसके कसै ले घे नैर् पदैर् न । जनचाहना÷अपे क्षा अनुसार छिटो अगाडि बढौ ं । परम्पराले दुईतिहाई खे र जाने छ । हात्ती आयो फुस् सा भन्ने भनाइजस् तो नहो स् ।’
कपिलवस् तु निर्वाचन क्षे त्र नं. १ का प्रादे शिक सांसद विष्णु पन्थीको फे सबुक टिप्पणी हो यो  । सत्तासीन दलकै सांसद हुन् उनी । सरकारी सांसदलाई नै संघीय सरकारको कार्यशै ली मन परे को रहे नछ, छै न भने अरुले कसरी लिए हो लान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय भयो  । घे राबन्दीको जवाफ विपक्षीले दिनै परे न । किनारमा बसे र मुसुमुसु हा“से र खुच्चिङ् भने हुन्छ, पुग्छ । हाइसञ्चै छ । अहिले को सरकारले दिएको सुविधा हो यो  ।
क्षमता भए, काम गर्न चाहे , यति सहज मौ का कहिल्यै मिल्दै न सरकारलाई । तलदे खि माथिसम्म कहीं कतै कसै ले अवरो ध गर्नसक्ने अवस् थै विद्यमान छै न । आफूले के ही गर्न नसक्ने , अनि घे राबन्दी भयो भने र पन्छिने , उम्किने , को स“ग हो बम्किने ?
प्रादे शिक सांसद विष्णु पन्थीको उल्ले खित जवाफ र तर्क धे रै लाई चित्तबुझ्दो भएछ, लागे छ । त्यसै ले टिपे र पस् िकयो  । यसरी पाठकसमक्ष पस् िकने बे लासम्ममा उनको टिप्पणीलाई साढे तीनसय लाइक, दुई सयजति कमे न्ट र तीन दर्जनभन्दा बढीले शे यर गरिसके का थिए । यसर्थ जनआवाजको प्रतिनिधित्व गरे को छ र जनबो ली हो यो  । अन्धभक्त हनुमानहरुले पनि अनुमान गर्नपर्छ अब । गलत काम गनेर् सल्लाह दिएर उचाले र नपछारे हुन्छ । दे खिएका आलो चक र दुश्मनभन्दा आफै भित्रका, नदे खिएका, प्रशंसा गरे र, धरापमा पारे र, बदनाम गराएर सिध्याउने शत्रु धे रै खतरनाक हुन्छन् । पञ्चायतलाई तिनै ले पंगु बनाए । कांग्रे सलाई कहालीलाग्दो स् िथतिमा तिनै ले पु¥याए । कम्युनिष्टको पालो हो ला अब । उम्कने कि फस् ने ? आफै विचार गनेर् हो  । दे शी विदे शी प्रतिक्रियावादीले गनैर् दिएनन् भने र अनावश्यक आरो प लगाएर आफ्नो अयो ग्यता ढाकिन्न । संकट टाढिन्न । लो भ, मो ह र अहंकारको आकार छे किन्न ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकार, छ वटै प्रदे शमा पनि आफ्नै पूर्ण बहुमतकै सरकार, २ नं. प्रदे शमा मात्रै बाध्यताले विपक्षमा रहे र पनि सबभन्दा ठूलो दल भएका बे ला यदि के ही गर्न सकिदै न र घे राबन्दी भयो , प्रतिक्रियावादीले छे के भनिन्छ भने अरु के ही हो इन त्यो , आफ्नै छाया“स“गको तर्साइ मात्र हो  । वनको बाघले के ही गरे कै छै न । मनकै बाघले खाएको हो , डराएको हो  । यति कमजो र तन र मन भएका व्यक्तिहरु त्यति माथि कसरी पुगे हो लान् भने र सो च्नुपनेर् र विकल्प खो ज्नुपनेर् पो हो कि ? भने र आवाज उठ्न थाले को छ उनीहरुकै दलभित्र । र, टिप्पणीमा आएका छन्– नाच्न नजान्ने ले अँ“गन टे ढो दे खे को ’ मात्र हो भने र । उखान टुक्का र हट्टा–कठ्ठा, सत्ताका भत्तामा पालिएका पठ्ठाका ठट्टा मजाकले दे श हा“क्न सकिदै न । अलि गम्भीर, जिम्मे वार र परिपक्व हुन सिक्न र सदाचारी बन्नुपर्छ भने र ।’ प्रशंसा मात्र सुन्न चाहने का मगजमा घुसे पो , अलि ठण्डा दिमागले सो चे त हुन्थ्यो नि !
माधव ने पाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, प्रदीप ने पाल, घनश्याम भुसाल र यो गे श भट्टराईहरुलाई माछो –माछो भ्यागुतो भन्दै बुढी औ ंला दे खाउने हरुको पाइन पनि दे खियो भन्ने हरुको भीड बढ्दै छ । रघुवीर महासे ठ र गो कुल बा“स् को टाहरुका करामतले ओ लीका ओ ठमुख सुकाइदिएर बो ली बन्द गराउन थाले को अनुभूति गनेर् हरु बढे का छन् । सत्ताबाट बाहिरिएको ने पाली कांग्रे सका हड्डी हा“से का हो लान् । कम्युनिष्टले राम्रो गर्लान्, समस्या पार्लान् र अरु तल झार्लान् भने को त उही कांग्रे सले जस् तै र अझ त्यो भन्दा पनि गएगुज्रे को शासन चलाएपछि हाइसन्चो भएको छ । चारवर्षपछिको निर्वाचनमा के ही नगरिकनै , कम्युनिष्ट सरकारको असफलताले उनीहरुलाई सफल बनाउन मद्दत गनेर् भयो  । कांग्रे सको सरकारभन्दा यो सरकार के कारणले , कुन कामले फरक छ भने र कसै ले सो धे मा जवाफ दिन गाह्रो भएको छ शुभचिन्तकहरुलाई पनि ।
जनताको चित्त बुझाउन त सके न सके न यो सरकारले , पार्टीभित्रै का कार्यकर्ता र ने ताको पनि चित्त नबुझे को कुरा सार्वजनिक भयो  । मुख दे खाउनै गाह्रो भएको कुरा जब सत्तापक्षका सांसदले नै सार्वजनिकरुपमा ओ कल्न थाल्छन्, तब प्रतिक्रियावादीले काम गनैर् दिएनन् भने र उम्कन खो ज्नु वास् तविकताबाट भाग्नु हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न अरु प्रमाण चाहि“दै न । पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षलाई सवेर् सर्वा बनाएर जा“दा सामूहिक ने तृत्व र बै ठक बसे र निर्णय गनेर् परिपाटीको अन्त्य हु“दै गएको अनुभूति धे रै ले गरे को पाइयो  । न पूर्वमाओ वादीहरु खुशी दे खिन्छन्, न पूर्वएमाले हरु हर्षित छन् । एकता कता–कता रुमल्लिए जस् तो भएको छ । दुई अध्यक्षको आरति उतानेर् हरुलाई मात्र हीरा कटाई छ । विचार, सिद्धान्त र व्यवहारको कसीमा ढालिन खो ज्ने लाई आपत दे खिन्छ र छट्पटी भे टिन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणले सुशासन र न्यायका सारा सूत्र, सम्बन्ध र संरचनालाई अक्षम प्रमाणित गरिदिएका छन् । शिक्षा र स् वास् थ्य क्षे त्रका माफियाको चंगुलमा फसे को आरो प लागे े को सरकारलाई ठग ठे के दारको रक्षाकवचको नकाव उतार्न पप्पु कन्स् ट्रक्सनलाई लगाइएको मुद्दाले कति राहत दे ला ? अरु धे रै पप्पुहरु खुलै छन् । यातायात क्षे त्रको सिण्डिके टको सञ्जाल तो डे को भने र गर्व गरे पनि सिण्डिके टकै बकोर् ओ ढे को भे टियो  । समृद्धिको सपना बे वारिसे नहो स्, साकार भएको दे ख्न पाइयो स् ।
ने पाली कांग्रे सको कुशासनबाट मुक्त हुन कम्युनिष्टलाई बहुमत दिएका जनताले सुशासनको आश गर्नु नाजायज हो इन । आश गरे र बसे का जनतालाई गास र बासको ग्यारे न्टी दिनुको बदला त्रास दिने र उठिबास गराउने हो भने सास जो गाउन गाह्रो हुने छ । सास जाने बे लामा आउने साहसले जस् तै सरकार र सत्ताको जरो किलो नाश गर्न सक्छ भन्ने कुरा नबिसेर् हुन्छ । श्रीपे चसहित नारायणहिटीको बास त दीर्घायु हुन सके न भने सिंहदरबार र बालुवाटारले त धे रै लाई दलाउ“दै , गलाउ“दै र ढलाउ“दै गरे को विगत छ । आगत कति फरक पर्ला र ?
शे रबहादुर दे उवाजस् ता घो षित असक्षमले समे त ‘नालायक सरकार’ भन्ने आट गर्नु उचित है न, छै न । एउटा नालायकले अकोर् नालायकलाई नालायक भन्दै मा लायक हुने भए यो संसारका धे रै लायकहरु ने पालमै हुन्थे  । नालायकै नालायकका सरकारका कारण दे श बर्बाद भएको त हो नि ! जनताले लायक नायक खो जे का हुन्, छन् । आश गरे का र भर परे काहरु अहंकारकै कारण नालायक भएपछि दुर्गति हुने नै भयो  । दुर्गतिका नायकबाट प्रगतिको आश गर्नु, भर पर्नु लाजको मर्नु भयो  । लाज ढाक्ने उपाय चाहियो हजुर ।
Previous: नीतिले राजनीतिक दललाई निर्देश गर्ने दिन कहिले आउला ?
Next: ज्ञानमालामा अभिभावकलाई प्रशिक्षण